ururinta huteelka dib u eegista furaashka aireloom - Rayson
ururinta huteelka dib u eegista furaashka aireloom
Waxaad ku jirtaa meesha saxda ah ururinta huteelka dib u eegista furaashka aireloom.Hadda waxaad horeyba u ogaatay taas, wax kasta oo aad raadineyso, waad hubtaa inaad ka heli doonto Rayson.waxaan damaanad qaadaynaa inay halkaan tahay Rayson.
Soosaaraha Joodariga Rayson Spring ayaa hogaaminaya la qabsiga isbeddelka horumarka warshadaha..
Waxaan higsaneynaa inaan bixinno tayada ugu sareysa ururinta huteelka dib u eegista furaashka aireloom.macaamiisheenna muddada-dheer waxaanan si firfircoon ula shaqeyn doonnaa macaamiisheenna si aan u siino xalal wax ku ool ah iyo faa'iidooyin kharash ah.
Shiinaha (Marriott / Hilton) Ururinta Hoteelka EuroTop 5 Star Hotel Mattress saarayaasha-
Rayson ee Aagga Warshadaha Rayson, Wadada Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Shiinaha. Waxyaabaha ugu waaweyn Shiinaha (Marriott / Hilton) Ururinta Hoteelka EuroTop 5 Star Hotel Mattress saarayaasha-. (Marriott / Hilton) Ururinta Hoteelka EuroTop 5 Star Hotel Mattress Tiknolojiyadda dhowrista tamarta waxaa loo isticmaalaa horumarinta Rayson. Beddelka soo noqnoqda, xakamaynta qulqulka korantada, ama tikniyoolajiyada korantada elektaroonigga ah ayaa la qaatay si si buuxda loogu isticmaalo korantada. Waxay siin kartaa isticmaalayaasha khibradaha hurdada ugu weyn ee suuqa. Si dabiici ah ayaa loo neefsan karaa, oo waxay nuuuqdaa qoyaanka waxayna yareysaa khibrada dhididka. (Marriott / Hilton) Ururinta Hoteelka EuroTop 5 Star Hotel Mattress Qiimaha badeecadani waa mid tartameysa oo hadda siweyn loogu isticmaalo suuqa.
Qiimaha ugu sarreeya ee Sariirta Sariirta Xilliga Jiilaalka 10ka Sare
Qiimaha ugu sarreeya ee Sariirta Sariirta Xilliga Jiilaalka Kusoo iibso + Qiimaha ugu Fiican Top 10 Kusii Sigaarka Xilliga Diiran ee Jiilaalka, Shay cusub iyo iibka kulul ilaa 2018.Both compressing and packing are available.Pocket spring.Best qiimaha, https: //www.raysonglobal .com.cn
Biyo macaan oo jilicsan oo jeex jeexan ah
Alaabada kulul Gorgortanka Iibinta Polyester ee Soosaarayaasha barkimooyinka
R $ $> Rayson ee aagga warshadaha Rayson, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Waxyaabaha ugu Muhiimsan ee alaabooyinka Xirfadlayaasha Alibaba Hot Gorgortanka Iibinta Polyester ee Soosaarayaasha barkimada Tayada Rayson waa la damaanad qaaday. Nidaamkeeda wax soo saar wuxuu diiradda saarayaa nabadgelyada iibsadaha iyadoo la hubinayo u hoggaansanaanta heerarka amniga inta lagu jiro howsha.
Dhiirrigelinta mihnadleyda ah ee dharka sare ee gogosha ku duuban ee soosaarayaasha sanduuqa
Rayson ee Aagga Warshadaha Rayson, Wadada Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Shiinaha. Badeecadaha ugu waaweyn Xaraashka mihnadleyda ee wanaagsan ayaa ku duubnaa dharka wanaagsan ee dharka dillaacsan ee badeecadaha ka ganacsada. dhiirrigelinta qiimaha wanaagsan ee dharka gogosha ah ee dharka lagu duubay ee sanduuqa Koontaroolka tayada leh ee Rayson waxaa si adag loogu fuliyaa tallaabo kasta oo ka mid ah hannaanka wax soo saarka, gaar ahaan xulashada qalabka loo yaqaan 'elastomer'. Imtixaanno badan oo waxqabadka Rayson ayaa la sameeyay. Iyagu waa tijaabooyin ka hortaga bakteeriyada, tijaabada iska caabin ah ee baabi'inta, qoyaan-dhuminta, adkaanta, iyo tijaabinta xoogga. dallacsiinta qiimaha wanaagsan ee dharka gogosha leh ee dharka lagu duubay oo sanduuqa ku jira Sheyga ayaa leh xoog weyn. Waxay ka kooban tahay qalab aad u adag iyo waxyaabo ay ka kooban tahay, waxay u istaagi kartaa cimilo xun, gariir, gariir, iyo dumin.
Rayson ee Aagga Warshadaha Rayson, Wadada Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Shiinaha. Alaabooyinka ugu waaweeyn ee ugu fiican ee raaxada leh ee Boqolleyda King Mathie Alaab bixiyaasha. Firfircoonaanta Boqortooyada ee Xaddiga Dhaqaale ee raaxada leh Alaabada ayaa baahida weyn ka dhexeysa nolosha dadka iyo shaqada. Waxaa si aad ah loogu adeegsaday guryaha, ganacsiga iyo warshadaha. Rayson waxaa lagu horumariyey tikniyoolajiyadda horumarsan. Waxaa loo qaabeeyey iyadoo la adeegsanayo CAD, oo laga been abuuray tikniyoolajiyadda CNC, isla markaana ay xukumayaan teknolojiyadda dareemayaasha. Raaxada Dhaqaalaha Boqolleyda Xamuul ee raaxada Su'aalaha la isweydiiyo: 1.Ma waxaad leedahay shirkad ganacsi ama warshad? Waxaan nahay warshad, waxaan ku takhasustay soosaarida joodariyada, dharka dhogorta lahayn iyo isha wax ka badan 10 sano.at isla waqtigaas, waxaan leenahay koox iibisa xirfadleyda oo wax ka qabta ganacsiga qaran. 2.Miyaad iga caawin kartaa inaan sameysto nashqadeynteena ama u adeegso sumadeyda sheyga? Waxaan u sameyn karnaa joodariga iyadoo loo eegayo qaabeyntaada ama waxaan ku siin karnaa adeegga OEM kaliya waxaan u baahanahay inaad na siiso farshaxankaaga wax soo saarka ama sawirrada sumadda. 3.Sidee qaababka lacag bixinta aad aqbashaa? LC at arag / by TT, 30% Deposi iyo 70% dheelitirka waxay ka soo horjeedaa nuqulada dukumiintiyada dhoofinta ah 7 maalmood maalmaha shaqada. Wax muhiim ah waxaan u baahanahay inaan dhaho: 1.Maybe waa wax yar oo ka duwan waxa aad dhab ahaan rabto. Xaqiiqdii, qiyaasta qaar sida qaabka, qaabdhismeedka, dhererka iyo cabirka waa la diyaarin karaa. 2.Maxaa kugu wareersan tahay waxa ku habboon joodariga guga ee la iibin karo. Hagaag, Thanks to 10 sano oo waayo aragnimo ah, waxaan kusiineynaa xoogaa latalin xirfadeed ah. 3.Maamilaheena asaasiga ah ayaa kaa caawin doona inaad abuurto macaash badan. 4.Waxaan ku faraxsanahay inaan aqoontaada la wadaagno, kaliya nala hadal. Ku saabsan: Rayson Global Co., Ltd waa iskaashi ganacsi oo Sino-US ah, oo la aasaasay 2007 kaasoo ku yaal Shishan Town, Foshan High-Tech Zone, waxaana lagu dejiyey meel u dhow shirkadaha waaweyn sida Volkswagen, Honda Auto iyo Chimei Innolux. Warshadda ayaa ah Qiyaastii 40 daqiiqo oo baabuur ayaa laga keenay Madaarka Caalamiga ah ee Guangzhou Baiyun iyo Hoolka Bandhigga Canton Fair.
Futada Xilliga Xilliga Fudud ee Xilliga Fudud "https: //www.raysonglobal.com.cn
Rayson ee Aagga Warshadaha Rayson, Wadada Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Shiinaha. Alaabada ugu waaweyneyd Joodariyaal joodariyaal hal-geesi ah le 市 瑞 信 信 无纺布 有限公司. joodariga guga kaliya Alaabada ayaa siweyn looga garatay warshadaha iyadoo ay hoos imaaneyso Rayson. Shayga wuxuu soo bandhigayaa waxqabad joogto ah oo ay macaamiishu ku kalsoonaan karaan. joodariga guga kaliya Alaabtu waa bakteeriyada dila bakteeriyada. Waxaa lagu daaweeyaa wakiilada bakteeriyada dila taas oo dhaawaceysa qaab dhismeedka microbial-ka oo dila unugyada bakteeriyada.
Qalabka adag ee Foam Hard Pillow Top Pocket Spring Poress + https: //www.raysonglobal.com.cn
Foam Memory Foam & Foam Hard Foam Enressment Matress + https: //www.raysonglobal.com.cn